Ungasiguqula kanjani isithonjana se-KDE "sokuqala" (noma isiqalisi sohlelo lokusebenza) | Kusuka kuLinux
Imininingwane ekhangayo yokwenza ngokwezifiso ideskithophu yethu ngokungangabazeki iyinkinobho enkulu, isiqalisi sohlelo lokusebenza. Ngiqonde inkinobho esivame ukuba nayo ekhoneni elingezansi kwesobunxele, noma ekhoneni eliphezulu elingakwesokunxele, inkinobho esivula ngayo uhlu lwezinhlelo zokusebenza ezifakwe ohlelweni, ezindaweni, njll.
Isithonjana saleyo nkinobho, okungaba yisithonjana se-KDE, i-openSUSE, i-Kubuntu, i-Chakra noma enye i-distro, kuya ngokuthi usebenzisa yiphi, kahle ... leso sithonjana singashintshwa kalula.
Ngishiya isithombe-skrini sami ukuze ubone:
Futhi manje ukuvala isithonjana:
Ukushintsha lokhu kulula impela, futhi ngiyakuchaza ngoba kukhona abasebenzisi abaningana abangayazi le mininingwane 😉
Okokuqala ake sikwenze Qhafaza kwesokudla kuleyo nkinobho bese ukhetha inketho Okuncamelayo kwesiqalisi sohlelo lokusebenza:
Iwindi elincane lizovuleka ngezinye izinketho:
Qaphela isithonjana osigqokile njengamanje, chofoza kuso bese
Iwindi okufanele bacinge ngalo futhi bakhethe isithonjana esisha abalifunayo lizovela 😀
Uma lokhu sekwenziwe, chofoza KULUNGILE futhi kuphelele lapho, ushintsho selwenziwe.
Nasi esinye isithombe-skrini esinesinye isithonjana:
Kuhle ... kufanele babe nomcabango 😉
Ngendlela, isithonjana samanje enginaso (engisibonise kuzithombe-skrini zangaphambilini) yile World of Goo, futhi "ngaboleka" umbono ku-Elav, njengoba ebeka isithonjana esikhathini esedlule HAHAHA.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Ungasiguqula kanjani isithonjana se-KDE "sokuqala" (noma isiqalisi sohlelo)
Hahaha, ngishintshe isithonjana esikwi-pc kamama sayifaka kwi-windows eyodwa, futhi kukholakala ukuthi zikwi-Windows 8 futhi iyiKubuntu 12.10.
Kepha ukubhekabheka, ukuhlela amafayela, i-imeyili kanye ne-facebook, awudingi okunye iqiniso.
Indlela entsha yokukhuthaza ukusetshenziswa kweLinux 😉
HAHAHAHAHAHAHA !!! Yebo, i-elav ine-anecdote engayitshela ngesimo esifanayo emsebenzini we-LOL!
Ngiyabonga kakhulu, bengingazi ukuthi lelo qhinga, ngikwenza ngazo zonke ezinye izithonjana kodwa bengingacabangi ukuthi okufanayo kungangenelwa ngale nkinobho.
Kuyinjabulo ukusiza 🙂
I-KDE yinhle nje, ingenziwa ngezifiso ngokungafani nenye i-hehe.
ukuphawula okuhle kakhulu, hhe, uzishintsha kanjani ezinye izithonjana? ngohlelo olulodwa kuphela, ngaphandle kokuthinta ezinye njengoba kwenza amaphakethe
Sawubona KZKG ^ Gaara, ngiyabonga kakhulu ngolwazi.
izolo nginqume ukuzama iFedora17 ne-KDE okokuqala futhi kufanele ngisho ukuthi ngiyayithanda imvelo. Ngithanda kakhulu nokuthi ikhalenda libukeka kanjani lapho etafuleni lakho. Ukwenze kanjani lokho? Uyazi noma yimuphi umhlahlandlela opholile ochaza ukuthi ungenza kanjani i-KDE ibe yinhle?
Ikhalenda empeleni liyi-rainlendar2 - » http://www.rainlendar.net/
Hhayi ... ukwenza ngokwezifiso i-KDE yilokho esisele nakho kokuthunyelwe hahahaha - » https://blog.desdelinux.net/tag/kde/
Ngithembe… sibeke okuningi, okuningi nge-KDE lapha 😉
Futhi akukho lutho, ngiyabonga ngokuphawula 😀
Umbuzo. Ezinsukwini ezedlule bengisebenzisa i-Kubuntu 12.04 yami efakwe emasontweni ambalwa edlule futhi phakathi kokunye engikwenzile, ngithuthele iphaneli phezulu futhi angazi ukuthi ngizolibeka kanjani. othile uyazi ngomyalo obuyisa iphaneli noma okuthile okunjalo ... angakujabulela kakhulu.
Vula izinto ezinemifanekiso, chofoza ku-logo ye-plasma kuphaneli, futhi lapho ithi i-Edge yesikrini uvele uyihudule lapho uthanda khona.
i-sieg84 ayisebenzi, kudala ngenkathi ngisebenzisa ubuntu 11.04 ideskithophu yanyamalala ngokuphelele futhi ngomyalo wokuthi angikhumbuli ukuthi iyini, ngikwazile ukuyibuyisela futhi njengoba nje nganginayo. kepha ngiyabonga ngosizo lwakho ... uma kukhona owaziyo ngaloyo myalo mthumele ukuze ubone ukuthi uyangisebenzela yini.
ngilungele ukubonga i-SIEG84 ngokuthatha isikhathi esithile ukuzama ukungisiza. futhi angazi noma ngihleke noma ngibe namahloni ngoba bekulula kakhulu susa imenenja yomsebenzi> susa leli phaneli> engeza iphaneli> iphaneli elizenzakalelayo (noma into enjalo).
uma ngasizathu simbe ufuna ukuqala kabusha ngokulungiselelwa kwe-KDE, vele ususe ifolda ~ / .kde4 noma ~ / .kde igama lincike kwi-distro.
Ngiyabonga kakhulu ngethiphu, kepha yikuphi ukusabalalisa okusebenzisayo?
Ngenxa yelukuluku 😛
Ngisebenzisa iDebian Wheezy (ukuhlolwa kwamanje), nemvelo yami i-KDE 🙂
O, ngiyabonga ngejubane!
Bengilokhu ngidla ukhukhunathi ehlobo lonke, futhi namanje angazi ukuthi ngisebenzise ini. Njalo ngeviki ngishintsha ukusatshalaliswa cishe, kepha njengamanje ngine-boot-boot ene-Ubuntu 12.10 (ukuyivivinya) neMint Cinnamon. IMint neCinnamon yinhle, kepha ubumbano, yize ngiyithanda, luhamba kancane futhi aluzinzile. Ngike ngadlalisana neFedora ne-GNOME Shell futhi, futhi ngiyayithanda kakhulu ... Kepha njengamanje ngifuna i-distro ye-KDE ehloniphekile. Ngizamile i-OpenSUSE futhi bengingayithandi nakancane, iMint ene-KDE ibonakala ilungile impela, kepha kudinga umjuluko omningi ukulungisa i-Akonadi elokhu iqhubeka nokushayeka.
Ungangincoma ini? Nginokuhlangenwe nakho okuthile ku-Linux, futhi ukuzama ngizamile i-Arch kepha angazi, angikwazi ukunquma 😛
Kungumniningwane owenza ideskithophu yethu yehluke, umbuzo: ngabe ikhona indlela yokushintsha izithonjana zohlelo lokusebenza zabanye (ngohlelo olulodwa kuphela, ngaphandle kokuthinta ezinye, okuyilokho amaphakethe akwenzayo)?
Ungakwenza ngezindlela eziningana, ngokwesibonelo chofoza ngakwesokudla kusiqalisi sohlelo lokusebenza, bese uya ku- "hlela izinhlelo zokusebenza" futhi lapho uzobona izinhlelo zokusebenza kwimenyu, ungashintsha isithonjana kuleso osifunayo.
Ungathola futhi .desktop yalolo hlelo ku / usr / share / applications /
Noma sebenzisa okuthile okufana nalokhu: https://blog.desdelinux.net/cambiar-icono-a-un-tipo-de-archivo-en-kde/‎
Ngenze okukhonjisiwe, ngithatha i-png kepha akuveli lutho.
Hlangana ne-System76's Ubuntu All-in-One (umncintiswano we-iMac?)